Semalt: Google URL Scraper र Magic URL Scraper बीच भिन्नता!
एक यूआरएल स्क्रैपर इन्टरनेटबाट सामग्री लिन, लि or्क वा यूआरएलहरू फेला पार्न, र यसको अत्याधिक अन्तर्क्रियात्मक टेक्नोलोजीको साथ तिनीहरूलाई स्क्र्याप गर्नको लागि जिम्मेवार छ। दुबै Magic URL Scraper र Google URL Scraper पाठ र वस्तुहरूको एरे पार्स गर्न प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू खोज ईन्जिनको जस्तै काम गर्दछन् र प्रासंगिक कुञ्जी शब्दहरू खोजेर यूआरएलहरू फेला पार्छन्। तपाईंले भर्खरै एउटा कुञ्जी शब्द राख्नुपर्नेछ र तपाईंको यूआरएल स्क्र्यापरलाई तपाईंको आवश्यक सामग्री लिनुहोस्। त्यसोभए तपाईं CSV वा JSON फाईलहरूमा सामग्री वा यूआरएलहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई अफलाइन प्रयोग गर्नुहोस्। कुञ्जी शब्द खोजी गरे पछि तपाईले त्यसलाई फेरि खोज्नु हुँदैन किनभने गुगल यूआरएल स्क्रैपर र म्याजिक यूआरएल स्क्रैपरले तपाईलाई स्वचालित रूपमा चाहिने परिणाम दिनेछ।
१. गुगल यूआरएल स्क्रैपर:
गुगल यूआरएल स्क्रैपर मुख्य रूप से खोज ईन्जिन नतीजा, आरएसएस फिड, र यूट्यूब लि sc्क स्क्र्याप गर्न प्रयोग गरीन्छ। तपाईं यस उपकरणको साथ कुनै पनि प्रकारको कीवर्ड क्वालिटीमा सम्झौता नगरी खोजी गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको आफ्नै ब्ल्ग वा साइटको खोज इञ्जिन श्रेणीकरण सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। के अधिकांश व्यक्तिहरू चाहान्छन् भन्ने हो उनीहरूको व्यवसाय वा सामाजिक मिडिया खाताहरूसँग सम्बन्धित यूआरएलहरू, र गुगल यूआरएल स्क्र्यापरले तपाईंलाई ती सूचना तत्काल उपलब्ध गराउँदछ। एकचोटि सम्बन्धित यूआरएलहरू भत्काइए पछि, तपाईं सजिलैसँग आफ्नो हार्ड ड्राइवमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, गुगल ड्राईव वा बक्सनेटमा बचत गर्नुहोस्, वा CSV र JSON मा आयात गर्न सक्नुहुनेछ। निस्सन्देह, यो उपकरणले हामीलाई इन्टरनेट मार्केटिंग, पीपीभी र सीपीभी अभियानलाई अर्को चरणमा लैजान मद्दत गर्दछ, यसलाई सम्भव तुल्याउनको लागि यसको छिटो र प्रभावशाली विकल्पहरूको लागि धन्यवाद। साथै, गुगल यूआरएल स्क्रैपरले तपाईंलाई एसईओ अनुसन्धान र बजार विश्लेषणको गति दिनको लागि मात्र केही क्लिकहरूको साथ द्रुत र सही परिणामहरू प्रदान गर्दछ।
२. जादुई यूआरएल स्क्रैपर - सबैको लागि एक उत्कृष्ट उपकरण:
गुगल यूआरएल स्क्र्यापर जस्तै यो उपकरणले तपाइँको साइटको खोज इञ्जिन स्तर निर्धारण सुधार गर्दछ। यो 60०-दिनको परीक्षणको साथ आउँदछ, र तपाईंसँग अर्को दुई महिनाको लागि हराउन केही छैन। तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूलाई तपाइँलाई प्रतिस्पर्धा पछाडि धकेल्न नदिनुहोस् र चाहानु हुने परिणामहरू तुरून्त र सही रूपमा प्राप्त गर्न Magic URL Scraper प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाईं पीपीभी विश्लेषक वा मार्केटर हुनुहुन्छ, र एसईओ विशेषज्ञ वा वेबमास्टर हुनुहुन्छ भने, तपाईं मैन्युअल्ली खोज इन्जिनबाट URL हरू प्रतिलिपि गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो समय लिने कार्य हो, र तपाईं यो प्रक्रियालाई Magic URL Scraper को साथ गति दिन सक्नुहुन्छ। यो उपकरणले तपाईंलाई URL का सूचीहरू स्क्र्याप गर्न अनुमति दिन्छ जुन विशेष KРµСѓwРѕrds को लागि SERPС in मा राम्रोसँग श्रेणीमा छन्। तपाईं सजिलैसँग सूचीलाई निर्यात गर्न सक्नुहुनेछ जुन राम्रो सम्भावित परिणामहरू प्रदान गर्दछ।
दुबै गुगल यूआरएल स्क्रैपर र म्याजिक यूआरएल स्क्रैपरले स्थानीय बिंग, याहू र गुगल खोजी परिणामहरू स्क्र्याप गर्न अनुमति दिन्छ। तिनीहरूसँग आफ्नै विशिष्ट सुविधाहरू छन् र ईन्टरनेट मार्केटर्सलाई मद्दत गर्दछ र पीपीभी विज्ञहरू तिनीहरूको अनुसन्धानमा अझ गहन हुन्छन्। साथै, यी उपकरणहरूले महान प्रयोगकर्ता अनुभव, सूचनामा द्रुत पहुँच, बुकमार्कको साथ आउँदछन्, र सामग्री क्युरेटरहरू पनि उपयुक्त छन्। तपाईं यी दुई शक्तिशाली सेवाहरू प्रयोग गरेर कुनै पनि पीपीभी अभियान चलाउन सक्नुहुनेछ र गुणवत्ताको बारेमा चिन्ता लिन आवश्यक पर्दैन। एकचोटि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि यी दुबै उपकरणले उल्लेखनीय र भरपर्दो परिणामहरू दिन्छन् र तपाईंलाई आफ्नो खोज इञ्जिन स्तर निर्धारणलाई मद्दत गर्छन्।